စိတ်တိုင်းကျဗီဒီယို DJ သမား Drop
လာမယ့်အဆင့်အထိသူတို့ရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအမှတ်တံဆိပ်ယူခြင်းအားဖြင့်ကြီးမားတဲ့သက်ရောက်မှုဖြစ်စေလိုလားသူပိုင်းခြားသိမြင် DJ သမားသည်။ Up ကိုသင့်ရဲ့စတိုင်နှင့်အမှတ်တံဆိပ်ပတျဝနျးကငျြအပြည့်အဝထုတ်လုပ်အသံ-အမြင်အာရုံမျက်မှန်၏ 30 စက္ကန့်ရန်။ တရားဝင်ဘဝ-of-the-ပါတီအဖြစ်သင့်အနေအထားအားဖြည့်နေစဉ်ကြောင်းလိမ့်မည် wow အနေနဲ့ပရိသတ်ကိုတစ်ခုလုံးဝထူးခြားသော set ကိုတည်ဆောက်ခြင်းများအတွက်ဂရိတ်!
SKU: CustomDjVidDrop အမျိုးအစား: Uncategorized
30 စက္ကန့်အထိ။ စိတ်ကြိုက်။ ဝယ်ယူပြီးတာနဲ့ငါတို့သည်သင်တို့၏စတိုင်နဲ့ဦးစားပေးတစ်ဦးခံစားရဖို့သင်တို့နှင့်အတူအတက်ကိုလိုက်နာပါလိမ့်မယ်။
DJ သမားဗီဒီယို Loop တစ်ခုမှာ (သမုဒ္ဒရာ)
က Universal လိုဂိုရဲ့ style အတွက် DJ သမားကဗီဒီယိုမိတ်ဆက်ခြင်း။ တစ်ဦးကဂန္, အထင်ကရဖျော်ဖြေရေးသင့်ရဲ့ DJ သမားအမည်နှင့်ထုံးစံစာသားဖြင့် re-စိတ်ကူးခံစားရတယ်။ ဤသည် DJ သမားကဗီဒီယိုမိမိတို့၏အာရုံကိုဖမ်းရန်သေချာသည်။ အစအဦးသို့မဟုတ်သင့်အစုံမှာ DJ သမားမိတ်ဆက်ခြင်းအဖြစ်ဂရိတ်ရုံညာဘက်အလယ်၌, heck, ညဉ့်ထွက်ပိတ်လိုက်သို့မဟုတ်ရန်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ DJ သမားကို drop နဲ့ DJ ဗီဒီယိုများအားလုံးလိုပဲဒီစိတ်ကြိုက်, အရည်အသွေးမြင့်မား, High Definition ဗီဒီယိုဖြစ်ပါသည်။ အမျိုးသားသို့မဟုတ်အမျိုးသမီးသာ $ 50 များအတွက်ဗီဒီယိုအစိတ်အပိုင်းကိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုတဲ့ထုံးစံ ADD ။
သင့်ရဲ့ခြေအိတ်ချွတ်ခေါက်လိမ့်မည်ဟု ... မည်သည့်ဘာသာစကားများတွင်မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ရုပ်မြင်သံကြားနဲ့ Web အစက်အပြောက်! ကျွန်တော်တို့ကိုနှစ်သစ်ကူးအကြိုပေါ်တွင်သင်၏တံခါးများမှတစ်ဆင့်မြည်းရောက်စေဖို့ဖန်တီးမှုထုတ်လွှင့်ထုတ်လုပ်မှုကျွမ်းကျင်မှုအနိုင်ရကျွန်တော်တို့ရဲ့အထူး Telly ဆုချီးမြှင့်ကိုသုံးပါစေ! Turnaround အချိန် 5-7 စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရက် ... ဒါကြောင့်အချိန်ထွက်ပြေးမတိုင်မီမြန်မြန်! ကျွန်တော်တို့ရဲ့ View ဗီဒီယိုကိုစီးပွားဖြစ်ပို့လိုက်ကြတယ်။ ဝယ်ယူပြီးနောက်, ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖွဲ့သင့် TV အစက်အပြောက်၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုဆုံးဖြတ်ရန်မဟာဗျူဟာအစည်းအဝေးအစီအစဉ်ရေးဆွဲရန်သင်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါလိမ့်မယ်။
DJ သမားဗီဒီယို Loop လေး (သမုဒ္ဒရာ)
DJ သမားဗီဒီယို Drop TWO
အခြိနျအကနျ့အရောင်းအားအပေါ်! နှစ်ခုကွဲပြားခြားနားသော BPM ရဲ့ထံမှအကူးအပြောင်းလုပ်ဖို့ဂရိတ်ဗီဒီယိုကိုတစ်စက်! "သူများနှင့်စျယောကျစီအပေါ်ရောနှောခုနှစ်တွင် - (ပေါက်ကွဲမှု), ဒီ (Club သို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီအမည်) မှ DJ (သင့်အမည်) သည်! * အပေါင်းအဘယ်သူမျှမပိုဆောင်းတာဝန်ခံမှာဗီဒီယိုအတွင်းပိုင်းသင့်ရဲ့အမှတ်တံဆိပ်ကိုထည့်သွင်း!